Misy sazy mandrakizay ve? , Fiangonan'Andriamanitra an'Andriamanitra Suisse (WKG)
Saingy ny Kristiana sasany dia maniry antsika hino fa Andriamanitra, Raintsika any an-danitra, izay tsy malemy ary tsy tonga lafatra, dia manasazy olona mandrakizay mandrakizay, eny fa na dia olona izay mbola tsy naheno ny momba ny filazantsara aza. Ary lazao amin'Andriamanitra fa feno fahasoavana sy famindram-po izy.
Andao aloha hieritreritra an'izany, satria misy elanelana lehibe eo anelanelan'ny zavatra ianarantsika amin'i Jesosy sy ny zavatra inoan'ny Kristianina sasany momba ny fanamelohana mandrakizay. Ohatra, nandidy antsika Jesosy ho tia ny fahavalontsika ary hanao soa amin'izay mankahala sy manenjika antsika aza. Saingy misy ny Kristiana sasany mino fa tsy mankahala ny fahavalony Andriamanitra, fa mamela azy ara-bakiteny, ary tsy manam-pitiavana sy tsy mihetsika mandrakizay.
Toy ny itiavan'ny zanakay ny zanatsika tokoa, tsy mainka ve ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo? Ity no fanontaniana mampiavaka - Tian'Andriamanitra bebe kokoa mihoatra noho izay azontsika atao.
Hainao fa izao tontolo izao hamonjy an'izao tontolo izao dia tontolo iray izay tian'Andriamanitra tokoa ka nandefa ny Zanany hamonjy azy - miankina amin'Andriamanitra sy Andriamanitra irery ihany. Raha miankina amintsika ny famonjena sy ny fahombiazantsika amin'ny hitondrana ny filazantsara amin'ny olona, ​​dia hisy olana lehibe. Saingy tsy miankina amintsika izany. Miankina amin ’Andriamanitra ary Andriamanitra no naniraka an’i Jesosy hanao ilay asa ary Jesosy no nanao ilay asa.
Voatahy isika raha afaka mizara ny filazantsara. Ny tena famonjena ny olona tiantsika sy tiantsika, ny olona tsy fantatsika, ary ireo olona izay toa antsika, dia mbola tsy naheno ny filazantsara mihitsy. Raha tsorina dia ny famonjena ny olona rehetra dia raharaha iray izay karakarain'Andriamanitra, ary tena ataon'Andriamanitra tokoa. Izany no ametrahantsika ny fitokisantsika aminy, ary ao aminy irery ihany!